Punya Karki | Nepali Stories
Punya Karki – Firta Bhayeko Muskan
पुण्य कार्की – फिर्ता भएको मुस्कान
ऊ दोपहरको घाममा झोला बोकेर गेटभित्र के छिरेको थियो । बार्तलीमा खेलेकी छोरीले देखिहाली छे । हातको पुतली त्यत्तिकै छोडेर “बाबा ! आउनु भो चिच्याउँदै गेटमा बाबालाई च्याप्प समाउन पुगी । छोरीलाई दुई हातले च्याप्प्ा उठाएर उसले दुईटै गालामा म्वाइँ खायो । छोरीले बाबाको गलो यसरी बेरी उसलाई सास फेर्न गाह्रो भयो ।
कोठाभित्र पसेर राम्ररी झोला बिसाउन पनि भ्याएको थिएन छोरीले बाबुको गला अवरुर् हुने गरी भनिहाली “बाबा ! अब कहिल्यै पनि जागीरमा नफर्किनु ल ।” उसले कुनै जवाफ दिन सकेन । छोरीले फेरि ख्यारख्यार पारी “है बाबा ! अब घर छाडेर कहीँ पनि नजानु ल । ल बाबा हुन्छ भन्नु न ।”
“किन छोरी तिमीलाई कसले के भन्यो?”
“हजुरलाई माओबादीले मार्छन रे क्या !”
“…………………………” उसले कुनै जवाफ दिन सकेन । एक भन्नु न दुई भन्नु छारीको कुराले अक्क न बक्क भयो ।
ऊ आँगन छेउको काठको कुसर्ीमा बसेर कागती चिया पिइरहेको थियो । छोरीको चुरीफुरी हेर्न लायकको छ । उसकी पत्नी दलानमा चामल केलाइरहेकी छिन् । खाटमाथिको झोलुङ्घामा काखको छोरो सुतिरहेको छ । धेरै लामो समयपछि बल्लतल्ल समय निकालेर ऊ घरमा निस्किएको छ । आक्रमणअपहरण र युद्धको कारणले उनीहरूलाई बिदा दिन छाडेको छ । चाडपर्वतिथिसरादको त के कुरा बाउआमा मर्दा पनि उसलाई घर जान दिइएको छैन ।
अस्ति मात्र उसको साथीको पिताजीको निधन भएको खबर आयो । एक त उसलाई घरसम्म पुग्न आँट आएन अर्को हाकिमले जाने निर्देशन पनि दिएन । उसले कोठामै बसेर जुठो बारिरहेको छ ।
उसको घर राजमार्गबाट दुई किलोमिटरभित्र गाउँ भएको कारणले कहिलेकाहीँ यसो हाकिमहरूलाई झुक्याएर आउने गर्छ । समय दिनप्रतिदिन यति जटिल बन्दैछ । र्न्र्को घाउ अझ चर्को रुपमा बल्ँिझदै गएको छ । िहंसाप्रतििहंसाको चक्रब्युहमा सर्वसाधारणको जीवन रुमलिँदैछन् ।
उसले पुलिसको जागीर बिवशताबश खाइरहेको छ । चटक्क छाडिहाल्न पनि मिल्दैन । घरमा दुईटा नानीहरू श्रीमती र बूढीआमा पाल्नु पर्ने बाध्यता छ । उसले जागीर सुरु गर्दा त देशको अवस्था ठीकै थियो । ज्यानलाई त्यती खतरा थिएन । एस।एल।सी पास गरेपछि घरको आर्थिक अवस्थाले पढाइ अघि बढाउन सकेन । मास्टरी खानलाई निकै कोसिस गर्यो त्यसमा पनि सफल भएन । जिल्लामा पुलीसको भर्ति खुल्यो लाग्छु भन्ने आशा त त्यती थिएन । त्यसमा पनि सोस्रफोस्रको बोलबाल चल्छ भन्ने सुनेको हो । त्यही पनि एकचोटि कोसिस गर्छु भनेर हिँड्यो । हट्टाकट्टा स्वास्थ्य स्थिति त्यसमा पनि एस।एल।सी पढेका कारण सजीलै भर्ना भयो ।
तालीम सकेपछि मिहिनेत गर्दै गयो । पढाइलेखाइमा सिपालु भएका कारण बाहिरी कामभन्दा भित्री लेखापढीको काममा नै ब्यस्त हुन थाल्यो । पुलिस भएको पाँचबर्षमा हवल्दार पदमा पदोन्नति भयो । त्यसको छ बर्षमा असई बन्यो । उसलाई अझ माथि जाने लालसा बढ्दै गयो । फलस्वरुप प्राईबेटको परिक्षार्थी भएर आई।ए पास गरी बि।एको जाँच पनि दिन थाल्यो ।
यस्ौबीच उसको सपनाहरू बिखण्डित पार्दै देशमा राजनीतिक बिद्रोह सुरु भयो । बिस्तारी देश युद्धको आगोमा जल्दै गयो । शासकहरूको मन्दबुद्धिका कारण पुलीसले बिद्रोहको सम्पूर्ण भार थाम्नु पर्ने घडी आयो । कसैको स्वर्गीय सुखको लागि उनीहरू धमाधम बलीको बोको हुँदै जानुपर्यो । सत्तामा बस्ने काला पुरुषहरूले उनीहरूलाई बहुलिठ्ठ युद्धमा बिबेकहीन ढङ्घले प्रयोग गर्दै गए । जसको कारण नमारिने मान्छे मारिँदै गए नथिुनने मान्छे थुनिँदै गए नचुटिने मान्छे चुटिँदै गए । कयौँ गाउँहरूमा मान्छेमा मानिसहरूको कत्लेआम गरियो ।
यसले गर्दा देशब्यापी रुपमा प्रतीशोधको ज्वालामुखी नै फुट्या । लोग्ने मारिए पछि कयौँ आईमाई पीठ्युँमा नानी च्यापेर जंगल पसे । दाजु मारिएपछि भाइबहिनी हँसियाखुर्पा जे भेटिन्छ सोही चिज बोकेर युद्धमा होमिए । दिनदिनै आफ्नो पेशा खतराको सुचीमा पर्दै गयो । हिजोसम्म सम्मान गर्ने मान्छेहरू घृणाको आँखा उचालेर हेर्न थाले ।
फेरि बिद्रोहको बारेमा उसको अलिक छुट्टै दृष्टिकोण रहेको छ । यो समस्या पुलिसले समाधान गर्ने समस्या होइन । यो त राजनीतिक दलहरूले सत्तासीन नेताले राजनीतिक तवरले हल गर्ने समस्या हो अनाहकमा पुलिसलाई थोत्रा थ्रिनट थ्री राईफलको बलमा पुलिस लगाएर दमन गरेर यो विद्रोहलाई रोक्नछेक्न र उनीहरूलाई मारेर तह लगाउन सकिन्छ भन्नु हुटिट्याँउले सगर थाम्न खोज्नुजस्तो हो । उसको यो भित्री सोच हो।सरकारको नुन खाएपछि खुलेआम बोल्न मिल्दैन।नचाहाँदा नचाहाँदै पनि बिभिन्न अपरेशनहरूमा जानु पर्छ।उ भन्दा जुनियरले अन्धाधुन्द मान्छे मारेकै कारण काँधमा दुईवटा फुली थपिसके।त्यसमा उसलाई पश्चाताप त छँदै छैन।पुलिसको पेशानै संकट र बेईज्जतीको दलदलमा परेकोमा भने दुःखबोध भने छ ।
छोरी अुगनमा उसले ल्याइएिको लावरको भकुण्डो रमाई रमाई उफारिरहेकी छ ।उ भने एक तमास रुपले टोलाईरहेको छ।बुढी भएकी आमा उसको हात काखमा तानेर मुसा्रदै पिलपिल आँसु झारिरहेकी छन् “नानी!भो छोडिदे त्यो नाथे जागिरबरु घरमै भैँसी पालेर दुध बेची खाँउला।राति निद्रा आँउदैनझलझली तँलाई सम्झिन्छु ।रेडियोमा यति मरे र उती मरे भन्छ।यो बुढेसकालमा डाँडामाथिकी जुनघाम भएकी मान्छेलाई कति पीरमा पार्छस नानी अब छाडिदे।”
आमाका कुराले उसका आँसु रसाउँछन ।एक शब्द बोल्न सकेन । आफुलाई सानैमा टुहुरो बनाएर बाउ मरेपछि आमाले कति दुःख गरेर हुर्काएको सम्ड्ढयो। एक्लो छोरो थियो ऊ । जोरीपारीको अगाडि ताडनालााछनाअपमान र अभावहरू सबै आफूले पिएर हुर्काएकी थिईन।उनको अनुहारमा विगतको त्यो दर्दपुर्ण समय प्रतिविम्वित थियो ।आमाको अवस्थाले ऊ साँच्चै द्रवित भयो।
झोला राख्ने निहुले कोठा भित्र पसेर आछ्यानमा लम्पसार सुत्यो ।सोचाइको सागरमा डुब्दै उत्रिँदै डुब्दै उत्रिँदै निष्कर्षविहीन अवस्थामा टोलाईरह्यो।
खेल्दाख्ोल्दैको भकुण्डो आँगनमै छोडेर छोरी भित्र पसी । ओछ्यानमा लम्पसार बाबामाथि छाँद हालेर उसको भुँडीमाथि सुती । “बाबा ! बाबा !! अब हामीलाई कहिल्यै छाडेर नजानु ल !”
“………………”उसले ल पनि भन्न सकेननाईँ पनि भन्न सकेन।
“ल भन्नु न बाबा ! ल भन्नु न !!
“किन नजानु बा ! “उसले ल भन्नुको साटो कारण खोज्ने कोसिस गर्यो ।
“तपाँईलाई मार्छन रे क्या । हो बाबा साँच्चै हो ”
“कसले भन्यो तिमीलाई “मायालु स्वर निकालेर सोध्यो ।
“मेरो साथी मिस्री र त्ाल्लाघरे कालेले भनेको क्या ।”
“के भने बा अनि उनीहरूले …।”
“उनीहरू राति बम हान्छन् अरे । त्यसपछि हामीसँग मिल्न आओ भन्छन अरे । तिमरको बन्दुक देओ भन्छन् अरे । जजस्ले बन्दुक दियो केहि गर्दैनन् अरे । अनि जसले बन्दुक दिएन उनीहरूलाई मार्छन अरे ।”
“………………।”ऊ कुनै प्रतिक्रिया नजनाई टोलाइमात्र रह्यो ।
“मिस्री र कालेले भनेको कुरा हो बाबा । साँचो हो ।”
“अँ अँ”टाउको हल्लाएर समर्थन जनायो ।
“बाबा ! तपाइर्ँपनि बन्दुक दिईहाल्नु ल । हुन्छ बाबा ।”
“हुन्छ बा हुन्छ ।”उसको चित्त बुझाउन खोज्यो ।
ऊ फेरि रमाउँदै भकुण्डो टिप्न आँगनतिर कुदी । उसले झोलाबाट ललिपप झिकेर फेरि भित्र डाक्यो । काखमा राखेर उसको कपाल सुम्सुम्यायो । उसका निर्दाेष आँखामा गहिरो गरी नियाल्यो । आँखामा बालसुलभ चाचलता घनिभूत रुपले नाचेको थियो । निष्कलंक मुहारमा जीवनको आभा धप्प बलेको थियो।
आँगनमा बेगनबेलीका कोपीलाहरू सयपत्रीका फुट्न लागेका थुँगाहरू मधुर सुवास छरेर फक्रिने तरखरमा थिए । उसले छोरीको मुहारमा तिनै कोपिलाहरूको प्रतिबिम्वलाई दर्शन गर्यो । भोलिको सुन्दर फूलहरूको जीवन आज दाग लाउनु हुँदैन । भोलिको दिनलाई उज्यालो बनाउन यिनको सुवास र सुन्दरता ज्यादै महत्वपूर्ण छ । यी कोपिलाहरू असमयमै ओइलाउनु हुँदैन । यस्तो सोच्दासोच्दै केही भावुक बनेछ । छोरीको ओठको निर्दोष हाँसो कतै मेरो मृत्युले असमयमै खोसिने पो हो कि उसको मनमा क्षण भरमै त्रासको बादल मडारियो।
यो मुनी कोक्रोमा यसको भाइ छ यी दुईटा नानीहरूको भविष्यको लागि पनि मैले केही साच्नै पर्छ फेरि चारवीस पुग्न लागेकी बूढी आमा पनि त छन् । उसको मन आमा हुँदै जीवन अर्ध्यांगिनीतर्फ मोडिन्छ । ऊ जीवनमा आज जस्तो भावुक कहिल्यै बनेको थिएन ।
“खाना तयार भयो । पहिले खाना खानु न ।” श्रीमतीको मृदुल एवम् मसृण बोलीले ऊ भान्सातिर आकर्षित बन्यो ।
“माम खाने अब माम खाने । म पनि आज बाबासगँ माम खाने ।”
“खाने खाने आज बाबाछोरी सँगै खाने ।” छोरीको कुरामा समर्थन जनायो । आज धेरै दिनपछि यस परिवारले एउटै छानामुनि बसेर खाना खाए ।
चाँदनी रातको मादकतामा संसार ल भएर सुतेको छ । निशाको घोर कलिमालाई जूनको रोशनीले छताछुल्ल उज्यालो बनाइदिएको छ । आँगन छेउमा बेगनबेलीको …… जातको फूल मगमग बासना छरिरहेछ । यो फूलको नाम त थाहा छैन तर साँझ परे पछि यसले सुगन्ध दिन थाल्छ । राती पनि यसको सुगन्धमा खिचिएर मौरी भँबरा र अन्य किराहरू आउने गर्छन्।
छोरी साँझमै सुतिसकेकी छ । आमा पनि सुतिसक्नुभएको छ । छोरो झोलुङ्घोमै निदाइरहेको छ । घडिले एघार बजाइसकेको छ । पति पत्नी टाँडको बरण्डामा बसेर अन्तरङ्घ कुराकानीमा डुबेका छन् । दुबैका आँखामा निद्राको लेश छैन । कुनै गहन बिषादमा परेका चखेवाचखेवीको जोडीजस्तो मनको सन्तापहरू पोखेर निलो आकाशका ताराहरू नियालिरहेका छन् ।
“हजुर त साँच्चै निष्ठुरी ! कत्ति भन्दा पनि लाग्दै नलाग्ने । जागिर छोडेर आउनु भनेको कहिलेदेखि हो छोरीले मलाई दिनको भोक न रातको निद बनाउँछे । आमा त्यस्तै पीरले सुकिसक्नुभएको छ ।”
” “ऊ अक्क न ब्ाक्क भएको छ । ऊसँग कुनै जवाफ छैन ।
“हेर्नु माईती गयो । माईतीमै सबैले ट्वाक ट्वाक गर्छन् । ज्वाइर्ँलाई भिनाजुलाई किन जागिर छोड्न नलाएको भन्छन् । अटेरी गर्दा गर्दै कुन दिन अनिष्ट ब्यहोर्नु पर्ने हो थाहा छैन…………” उनी त सुँक्कसुँक्क आँसु े झार्न पो थालिन् । ऊ पनि तरल बन्यो । उनका आँसु पुछिदियो । टाउको काखमा लिएर सुमसुम्याउन थाल्यो । “सरु किन यसरी रोएकी छोड्ने सोच त बनाउँदै छु नि तर हेर जागिर छाडेपछि कसरी गुजारा चलाउने हो पीर लागेर आउँछ !”
“के को पीर पौरखी मान्छेलाई खालि हात र भोको पेट बस्नुपर्छ । जसरी पनि यती जाहान सजिलै पाल्नसकिन्छ । आफ्नै खेतीले ८-१० महिना खान पुगिहाल्छ । भैँसी पाल्दा पनि भयो । बाकट खसीपालन गर्दा पनि भयो । कुखुरा पालेरै तल्लाघरे जेठाजु मैनाको दस हज्जार कमाउँछन् । हामी चैँ खाली हात बस्नुपर्छ ” श्रीमतीको आँटको भित्रभित्रै सराहना गर्यो । साँच्चै उसकी श्रीमती पौरखी छे । अल्छी कुन चराको नाम हो उनलाई थाहा छैन । ऊ जागिरमै बस्छ ढुक्कसित । घरव्यवहार खेतिपाती सारा कुरा भ्याएकी छिन् ।
“सरु आज म तिमीलाई एउटा कुरा भन्छु मान्छे ऊ त ” श्रीमतीको मन चोर्ने विचार गर्यो।
“के कुरा भन्नु न । राम्रो भए मान्छु नराम्रो भए मान्दिनँ ।”
“जागिर छोडेर विदेश जानुपर्यो दुईचार बर्षको लागि । कमाई पनि हुने सुरक्षित पनि हुइँने । एक त जागीर राजिनामा गरेर छोड्न सरकारले रोक लगाएको छ । भागेरै हिँड्नुपर्छ । त्यसो गर्दा सबै सुविधा पनि माया मार्नुपर्छ । फेरि गाँउमा सजिलो सँग बस्न पनि असहज छ । भन त सरु के गरुँ ।”
“ए पर्दैन पर्दैन विदेश जान पर्दैन । महिनाको पाँचसात हजार कमाउन विदेशै जानुपर्छ उहाँ बगाउने पसिना यहीँ बगायो भने यहीँ नै त्यति कमाई हुन्छ । तपाँई किन डराउनु हुन्छ गाँउका सबै जागिर छाडेर आइसके । खुशीको जागिर पो हुन्छ त । फेरि त्यो पेशा नै छाडेपछि उनिहरूले पनि राम्रै गरेको देखिएको छ । आखिर जागिरमा रहँदा पनि तपाइर्ँले उनीहरूलाई छेती पुर्याउने काम गर्नुभएको छैन क्यारे।”
श्रीमतीको कुराले उसको हृदयमा हौसला बढ्यो ।जागिर छोडेर पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने आँट पलायो ।sाेक्रामा सुतिरहेको नानी छट्पट्ाएर रुन थाल्यो । उनी उठेर नानी स्यार्हान थालिन् । घडिले आधा रात भएको संकेत दिईसकेको थियो ।
ओछ्यान मिलाएर सुत्ने तरखरमा लागे । तर यी दुई जोडिलाई आज निद्राले आफ्नो शरणमा बेर्न सकेन ।
उसको काखमा उनले यति धेरै ताता आँसुहरू बगाईन् । भोलिपल्टदेखि ऊ जागिरमा नफर्किने निर्णय गर्यो ।
बिहान छोरी नब्युँझिदै ऊ साँढे चारको दिवावसमा काठमाडौँ प्रश्थान गर्यो । आफ्नो पाकेको संचयकोष निकालेर पशल थाप्ने योजनाका साथ ऊ त्यता लागेको छ ।
घरको बिशेष परिस्थितिले जागिर गर्न नसक्ने ब्यहोराको राजीनामापत्र उतैको हुलाकबाट पठाईदिनलाई तयार गरेर हिँडेको छ ।
गाडि तुफान गतिमा हुँईकिरहेको छ । त्यो भन्दा बिजुलिवाण गतिमा उसको मन दौडिरहेको छ ।जीवनमा सर्वाधिक हलुङ्गो स्थिति महसुस भएको छ ।अव उसको जीवनको सबै ढोकाहरू खुलेको अनुभुति सल्वलाएको छ ।रातिको निद्रा सुत्ने कोसिस गर्छ ।तर निद्राले कसै गर्दा पनि आँखालाई चुम्वन गर्दैन । बरु उसको आँखामा सानि छोरी को निष्कलंक मुहार बुढि आमाको ममतामयि मुहार र श्रीमतिको हार्दिक तथा अप्रतिम प्रेमले ओतपोत अनुहारको झल्को एकपछि अर्को तँछाडमछाड गर्दै बल्झिदिन्छ ।ऊ ओठमा सन्तुष्टिको मुस्कान झिकेर वसको झ्यालबाट टाढाटाढाको रिगंन क्षितिजलाई चियाइरहन्छ ।
Posted in Punya Karki
Tagged Literary work of Nepali Story Writer Punya Karki Literatures of Nepali Story Writer Punya Karki Nepali Author Punya Karki Nepali Katha Nepali Katha Firta Bhayeko Muskan by Punya Karki Nepali Kathakar Nepali Kathakar Punya Karki Nepali Rachanakar Kathakar Punya Karki Nepali Sahitya Nepali Sahityakar Nepali Stories Nepali Stories By Punya Karki Nepali Stories Collection Nepali Stories Collection Of Punya Karki Nepali Story Nepali Story Blog Nepali Story Firta Bhayeko Muskan by Punya Karki Nepali Story Website Nepali Story Writer Nepali Story Writer Punya Karki Punya Karki - Firta Bhayeko Muskan Punya Karki's Nepali Story Firta Bhayeko Muskan Sahityakar Punya Karki Ka Nepali Katha Haru